Israely: Horonantsary maneho ny olan’ny fanakatonana ireo sisintanin’i Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2009 8:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Português, 简体中文, 繁體中文, English
Eo amin'ny tontolon'ny blaogy Israeliana, tsy dia tsapantsika loatra hoe misy mihaino na dia tsy misy miteny aza, izay no nitranga tamin'ny fanombohan'ny sarimihetsika fohy antsoina hoe “Closed Zone.” Sarimihetsika maharitra 90 segondra momba ireo faritra fivezivezena nohidiana any Gaza, “Closed Zone” izay efa in-31.600 nojerena ary ahitana tsikera 200 ao amin'ny YouTube, ka mbola mitohy mitombo hatrany.
Cinemascopian, Israelity Bites, One Jerusalem, sy ny Promised Land samy mampiseho ilay vidéo sy ny hafatra tiany ampitaina, fa tsy mitsikera.
Ao amin'ny blaogy Checkpoint Jerusalem, Dion Nissenbaum manome ny foto-dresaka sy ny mombamomba ilay sarimihetsika, manazava fa ny “Closed Zone” dia natao ho an'ny Gisha, ONG Israeliana tsy mpitady tombontsoa , izay miasa ho fiarovana ny fahalalaha-mihetsik'ireo mponina 1.4 tapitrisa ao amin'ny faritr'i Gaza.
Ao amin'ny fanambaràny momba ny fikatonan'ireo faritra fivezivezena any Gaza, izay efa nampiharina nandritra ny 18 volana, dia manoratra i Gisha:
Ny nanao ny “Closed Zone” dia i Yoni Goodman. I Goodman dia malaza manokana amin'ny naha Talen'ny Fanentanana azy tao amin'ny “Waltz with Bashir,” nandresy tamin'ny Sarimihetsika Vahiny Tsara indrindra tamin'ny Golden Globes Award ary amin'ny fitsarana ankapobeny ihany koa dia mbola isan'ireo tsara toerana tamin'ny sokajy nisy azy tamin'ny Academy Awards 2009. (Ilay sarimihetsika Zapone “Departures” no nibata ny fandresena.)
Tao amina resadresaka iray niarahana tamin'ny Jerusalem Post tamin'ny fotoana namoahana ny “Closed Zone” dia nanazava i Goodman: